स्रष्टा खगेन्द्र गिरी कोपिलासँग कुराकानी | samakalinsahitya.com
स्रष्टा खगेन्द्र गिरी कोपिलासँग कुराकानी
कहिलेकाहीँ आजको ठाउँसम्म मलाई समयले ल्याई पु¥याएको हो जस्तो लाग्छ । कहिलेकाँही लाग्छ म त पात्र मात्र हुँ जे भयो र म जहाँ पुगेको छु यो सब नियतिकै खेल हो तर कहिलेकाहीँ लाग्छ हामी कहीँ पुग्नु या नपुग्नुमा आफ्नो मेहनतको पनि केही न केही हात हुन्छ नै । सायद् मैले पनि मेहनत गर्ने कला जानेको भए आज आइपुगेको ठाउँभन्दा अलि पर पुगिसकेको पनि हुने थिएँ होला । राम्ररी मेहनत गर्न नसके पनि मानिसले बाँच्ने अभ्यास त गर्नै पर्दोरहेछ । म पनि अभ्यासरत छु ।
११) तपाईंलाई वर्तमान समयमा निस्केका आख्यान÷अनाख्यान कृतिहरूमध्ये कसकसका कुनकुन कृतिहरू कुन हदसम्म मन पर्छन् ? नामै किटेर भन्नु पर्दा केके हुन् ?
नेपालका साहित्यिक गुट उपगुटहरू रहरका गुट हुन् । स्वार्थ र संकीर्णताका गुट हुन् । साहित्यको सार्थक विकासमा यस्तो गुटवादले सार्थक मद्दत पु¥याउन सकेको छैन । हो, गफ, सुविधाको बाँडफाँड र चर्चा परिचर्चाको क्षेत्रमा यी गुटमा लाग्नेहरूलाई भने निकै फलिफाप भैरहेको छ ।
साहित्यलाई नगदसित जोडेर हेर्दा केही प्रकाशन गृहहरूको अहिलेको नेपाली पुस्तक व्यवसायमा भएको आक्रामक उपस्थितिले केही साहित्यकारहरूलाई आर्थिक रूपले सघाउ पु¥याएको देखिए पनि साहित्यकार र साहित्यिक कृति अमर हुने त पाठकको हृदयमैं हो । साहित्यिक प्रकाशनको व्यवसायीकरणले गुणात्मकता भन्दा बिकाऊ कुरा खोजिरहने हुँनाले राम्रो लेख्ने र बजारु चर्चालाई महत्व नदिने स्रष्टाहरूलाई यसले खासै असर गर्दैन । साहित्यलाई व्यवसाय भन्दा सामाजिक उत्तरदायित्व ठान्नेहरूलाई नगदले खासै प्रभावित पार्दैन ।
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : मगलबार, 24 आसाढ, 2071